Seddex Furayaal oo Ka Faa'ideysanaya Mawduucaaga | Martech Zone
Qaar badan oo suuqleyda ah waxay ka faa'iideystaan ​​hal tiknoolojiyad ay ku raaxaystaan ​​ama ku raaxaystaan ​​oo ay iska indhatiraan kuwa kale. Anigu waxaan ahay taageere weyn oo otomaatig ah iyo suuqleyda ka faa'iideysanaya farriintooda qaab, qaab, iyo qaab - intabadan oo aysan waxyeello u geysan dadaalladooda suuq-geyn.
Marka la eego shirkad ka faa'iideysaneysa waxyaabaha ku jira boggeeda, maqaallada, wargeysyada, daraasadaha kiisaska ama balooggeeda shirkadda, waxaan aaminsanahay inay jiraan saddex fure oo ka dhigaya waxyaabahaaga runti inay u shaqeeyaan shirkaddaada ama magacaaga:
Ku Xirnow - ku hayso bartilmaameedka oo, si kasta oo aad u jirrabto, iskuday inaad hubiso inaad had iyo jeer la hadasho macaamiishaada ama rajadaada. Tani waxay kuheleysaa awood iyo sumcad adag oo aad uga dhaqso badan haddii aad ka booddo ama aad ku kala duwato farriintaada.
Had iyo jeer faafi - waxaa jira rajo iyo macaamiil halkaas jooga oo doonaya waxyaabahaaga, laakiin ma oga inay jiraan. U soo gudbi maqaallada adeegyada kale, war-saxaafadeedyada, ku xir xiriiriyeyaasha cinwaanada, ku dar wada-hadallada ku saabsan barmaamijyada khuseeya, ku dhiirrigeli qoraaladaada qalabka wax lagu qoro ee bulshada, u gudbi boggaga wararka, wikis, iwm. waxyaabahaaga. Kudar xiriiriyeyaal qaan-sheegashadaada, saxiixyada emaylkaaga, kaararkaaga ganacsiga… meel walba!
Iskuxir Meelkasta - gebi ahaanba codsi kasta oo warbaahinta bulshada ah wuxuu leeyahay astaamo loogu talagalay in lagu daabaco quudintaada RSS adeeggooda. Isticmaal mid kasta! Dad badan ayaa adeegsada hal shabakad oo aan waligood marin habaabin, hubi inaad ka kooban tahay halka ay doonayaan inay ka helaan! Ku daabac barta Twitter, Sidoo kale!
Waxaad gelisay shaqo adag waxaadna qortay waxyaabo badan oo khuseeya. Hadda ka shaqee sidii loo hubin lahaa in waxyaabahaasi ay helaan dareenka ay mudan yihiin!
Tags: Isugeynta waxyaabahafaafinfaafin waxyaabahaku habboonwaxyaabaha ku habboonla socois-biirinta
Feb 25, 2009 markay ahayd 8:26 PM
Xabadaada kore: Tixgalintu waa furaha
Mid ka mid ah waxyaabaha sidoo kale furaha ah ayaa ah in hoos loo dhigo istiraatiijiyad. Tusaale ahaan istiraatiijiyaddeennu waa:
- la falgal suuqgeyaasha warbaahinta bulshada ee ka wada hadla istiraatiijiyadda, dejinta, ku habboonaanta iyo saamaynta
- aqri wax kasta oo ay daabaceen saamileyaasha sare (Brogan, Owyang…)
- ku mashquul bartamaha sixirka (dadka saamaynta weyn ku leh aqoontoodana u leh mowduuca).
Waxaan ku sharaxay habkayaga gaarka ah faahfaahin dheeraad ah halkan: http://blog.ecairn.com/2009/02/18/fighting-social-media-fear/
Wixii fikir celin ah si diiran ayaa loo soo dhaweynayaa.